Tsaho ny ankoatra izay, hoy ny mpitondra. Tany Marrakech Maroc, raha namonjy ny fihaonana iraisam-pirenena momba ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro ny filoha Rajaonarimampianina dia nanamafy fa ho avy eto Madagasikara hamonjy io Frankôfônia 2016 io ny filoha frantsay François Hollande. Ny ambasadaoro frantsay eto Madagasikara, Rtoa Vouland-Aneini ihany koa efa nilaza fa na feno aza ny fandaharam-potoanan’ny filoha frantsay dia ho tonga eto Madagasikara izy, handray anjara amin’io Fihaonana an-tampony io. Ny fanampim-baovao re manodidina io fiavian’i François Hollande io, dia hatory eto izy saingy tsy handany vola hipetraka any amin’ny hotely fa ho eny amin’ny trano fonenan’ny masoivoho frantsay eny Ivandry. Ny biraon’ny masoivoho sy ny trano fonenany anefa dia sokajiana ho anisan’ny sombin-tanin’io firenena soloiny tena io. Raha tsorina dia toy ny any Frantsa ihany i François Hollande raha matory eny amin’ny trano fonenan’ny masoivoho frantsay eny Ivandry. Ho avy hamonjy an’io Frankôfônia 2016 ihany koa ny Mpanjakan’i Maraoka, Mohammed VI ary tsy hatory amin’ny hotely ihany koa fa eny amin’ny trano fonenan’ny masoivoho maraokanina eny Androhibe. Lesona ho an’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tranga toy izao. Ny antsika raha mamonjy fivoriana iraisam-pirenena na dia aleha any ivelany any, dia mazàna any amin’ny hotely hatrany no mitoetra na manana masoivoho any amin’io firenena alehany io aza i Madagasikara.